Nhau - Nyika dzakasainira zviri pamutemo iyo RCEP indasitiri yezviridzwa yakaunza mune nyowani mamiriro ekutengeserana
Musi waNovember 15, 2020, nhau hombe yakauya ikave inotarisisa kutarisisa kwenyika pasirese. Mushure memakore masere ekutaurirana, vatungamiriri venyika gumi neshanu, kusanganisira China, Japan neSingapore, vakasaina chibvumirano cheRCEP kuburikidza nemusangano wevhidhiyo.
Izvo zvinodzidziswa kuti RCEP kazhinji inoreva kumatunhu Akazara Ehupfumi kudyidzana, uye nhengo dzayo nyika dzinosanganisira Indonesia, Malaysia, Philippines, Thailand, Singapore, Brunei, Cambodia, Laos, Myanmar, Vietnam, China, Japan, Republic of Korea, Australia uye New Zealand. Chibvumirano ichi chinofukidza kubviswa kwezvipingamupinyi zvemukati mekutengeserana, kugadzirwa nekuvandudzwa kwenzvimbo yemahara yekudyara, kuwedzerwa kwekutengeserana mumasevhisi, kuchengetedzwa kwekodzero dzepfuma, mutemo wemakwikwi nedzimwe nzvimbo.
Zvinoenderana nechibvumirano pakati penyika gumi neshanu chinotora nzira yemabhizimusi maviri ekuti zvinhu zvitengeswe zvakasununguka zviite gadziriro, mushure mekunge chibvumirano chatanga kushanda mukati medunhu zvinopfuura makumi mapfumbamwe muzana ezvekutengesa zvinhu zvichapedzisira zvawana zero zero, uye kazhinji zvichiderera ipapo. mitero kune zero uye yakadzika mitero kusvika zero kwemakore gumi, inotarisirwa kuti iite RCEP yemahara nzvimbo yekutengeserana munguva pfupi pfupi zvinhu zvese zvinotengesa kusununguka kuzvipira.
Bazi rezveMari rakati kusaina kwakabudirira kweRCEP kunoita basa rakakosha mukusimudzira mushure mehosha yekuvandudza hupfumi nekusimudzira budiriro yenguva refu nekusimudzira kwenyika dzese. Kuwedzera kumhanyisa kwekushambadzira kwekutengeserana kunounza kukurudzira kukuru kune hupfumi hwenyika nekutengeserana. Bhenefiti yakasarudzika yeSUNGANO ichabatsira zvakananga vatengi uye mabhizinesi emaindasitiri, uye ichaita basa rakakosha mukufumisa sarudzo mumusika wevatengi uye kudzikisa mutengo wekutengeserana wemabhizinesi.
Kusainwa kwechibvumirano chero chipi zvacho kuchazopedzisira kwadzokera mukusimudzira hupfumi uye mabhenefiti kuvanhu. Kune yeChina chiridzwa uye indasitiri yezviridzwa, kusaina kweRCEP kunosimudzira zvakanyanya "kubuda" uye "kuunza" kweChina chiridzwa uye indasitiri yezviridzwa, kuvhura mamiriro matsva ekutengeserana.
Senzira nemidziyo zvinoshandiswa zvakanyanya muindasitiri, kurima, kutsvagisa kwesainzi uye mamwe masosi ekuyera, kuunganidza, kuongorora uye kutonga, zvigadzirwa nemamita zvigadzirwa zvinofukidza angangoita ese masosi ezviitwa zvevanhu. Mushure memakumi emakore ekuvandudza, yeChina chiridzwa uye chiridzwa indasitiri yaumba chidimbu chakazara chigadzirwa chikamu, iine imwe yekugadzira nhanho uye kugona kugona kwemaindasitiri system, iyo yekukura iri kukurumidza kwazvo, zvimwe zvigadzirwa zvinosangana nepamusha musika chinodikanwa, asiwo hombe nhamba yekutengesa kunze kwenyika kumusika wekunze kwenyika.
Ichokwadi kuti isu ma tariff akaisa kumanikidza kubhenefiti kwevakawanda vatengesa kunze kubva pakatangisa hondo yekutengesa ya2018, asi mugore rapfuura vazhinji vanga vachitsvaga kusiyanisa misika yavo kudzikisira kukanganiswa kwemitero yedu.
Ino nguva, iko kubatsirwa kwakanyanya kwekusaina kweRCEP ndiko kudzikiswa kwemitero yekutengeserana pakati penyika dzeMEMBER dzeCHIBvumirano, zvichiita kuti zvive nyore kumakambani kudyara nekutengesa zvinhu uye masevhisi kunze kwenyika. Kune emabhizinesi ari kuita chiridzwa uye mita yekutengesa kunze, zvinobatsira kuwedzera chigadzirwa kunze, kuwedzera bhizinesi mari, kugadzirisa chigadzirwa kukwikwidza uye kuwedzera musika wekunze.
Uye zvakare, nekuda kwekudzikiswa kwemitero, chiridzwa uye zvigadzirwa zvemamita mune yakazara maindasitiri cheni yekudyidzana kwepasirese pamwe nekudyidzana uye zvinodhura, panguva imwecheteyo, misika yepasi rose neyepamusha inogona nyore kuchinjana kwezvinhu zvinodikanwa, zvinobatsira kumabhizinesi epamba kuunza kunze. chiridzwa uye zvigadzirwa zvemameter kusangana nezvinodiwa.
Panguva ino, nyika gumi neshanu dzakasaina iyo RCEP. Mune fomu rekuzvipira kwemitero yenyika yega yega, chiridzwa uye zvigadzirwa zvemamita zvinosanganisirwa zvinosanganisira mafomu ekushambadzira, vanoongorora masystem uye zvimwe zviridzwa nemidziyo inoshandiswa kuyera magetsi kana kuongorora. Mishini yekuyedza uye zvishandiso zveukukutu, simba, kumanikidza, kusimba kana zvimwe zvemuchina zvivakwa; Zvepanyama uye zvemakemikari ekuongorora zviridzwa uye zvishandiso (semuenzaniso, gasi chromatograph, mvura chromatograph, spectrometer).
Zvinotarisirwa kuti pamwe nekumisikidzwa kwemayunifomu emitemo ekutanga, maitiro etsika, kuongorora nekuisa vanhu voga, zviyero zvehunyanzvi nemimwe mirawo, kubviswa kwemitero uye zvisati zviri zvemitero kuchaburitsa zvishoma nezvishoma kuita kweRCEP kwekutengeserana. Seye wechipiri pakukura chiridzwa uye mita wegadziri munyika, kukwikwidza kweChina chishandiso nemamita zvigadzirwa zvichawedzerwa kuvandudzwa, zvichibatsira mamwe mabhizinesi nevatengi.
6 Waya Stepper mota, Servo Motor Actuator, Mbeu dzakauchikwa Stepper mota, Yakavharwa Loop Stepper mota Mutyairi, 220 Volt Ac Servo mota, Ac Stepper mota,